people Nepal » सधैं बासी रोटी खानुको अचम्मका फाइदा ! सधैं बासी रोटी खानुको अचम्मका फाइदा ! – people Nepal
सधैं बासी रोटी खानुको अचम्मका फाइदा !
Posted on November 26, 2017 by Purna Nanda Joshi
साँझ या विहान घरमा बाँकी रहने रोटीलाई बासी रोटी भनेर प्रायले जनावरलाई खान दिन्छन् । नभए फाल्ने गरिन्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ कि बासी रोटी खानुका धेरै फाइदा छन् ?
तपाईंले थाहा पाउनु जरुरी छ कि बासी रोटी खाँदा धेरै रोगबाट छुट्करा पाउन सकिन्छ । बासी रोटी खाँदा यस्ता रोगटबाट छुट्करा पाउन सकिन्छ ।
उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेसर)
यदि तपाईंलाई उच्च रक्तचाप (हाइ ब्लड प्रेसर)को समस्या छ भने बासी रोटी खानु तपाईंका लागि धेरै फाइदाजनक हुने छ । यसका लागि तपाईंले हरेक विहान चिसो दूधका साथ बासी रोटी खानुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा तपाईंको बढेको रक्तचाप सन्तुलनमा आउने छ ।
लामो समयसम्म भोकै रहँदा यदि तपाईंलाई पनि ग्यास्ट्रिक तथा एसिडिटीको समस्या छ भने बिहानै उठेर दूधसँग बासी रोटी खाने गर्नुहोस् । यस्तो गर्नाले तपाईंको पाचन प्रक्रियामा समेत मद्दत पुग्ने छ । साथै सुगर समेत कन्ट्रोल हुने छ ।
पाचन प्रक्रियामा गडबढी भएर तपाईं नियमित रुपमा तनावमा रहनुहुन्छ भने बासी रोटीको सेवनबाट तपाईंले धेरै राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ । नियमित रुपमा विहानै दूधसँग बासी रोटी खाँदा अपचको समस्या समाधान हुनेछ । जसले गर्दा तपाईंको मानसिक तनाव समेत अन्त हुनेछ ।
बढ्दै मानसिक समस्या
पूर्ण खोपको मात्रा लगाएकामा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी
काठमाडौंमा ७३ प्रतिशतले लगाए कोभिड खोप